Ngifuna ukulungisa indlu eneminyaka engu-119 ngasemfuleni i-Shimanto. - I-Airbnb
Ngifuna ukulungisa indlu eneminyaka engu-119 ngasemfuleni i-Shimanto.
Shimanto, Takaoka-gun, Kochi, i-Japan
Iqhugwane ibungazwe ngu-Sasakura
U-Sasakura Ungumbungazi ovelele
Silungise indlu endala ebiyelwe yi-Shimanto River. Izungezwe yizintaba, imifula, amasimu.Ngifuna ukudlala emfuleni nsuku zonke ehlobo, ngidlale ezintabeni ebusika, futhi ngilula nemvelo, ukuze ngikwazi ukuhlala isikhathi eside.Ngokukhethekile, ngithemba ukuthi imindeni enezingane ezincane ingasebenzisa isakhiwo sonke futhi ibacele ukuthi babuyele ukuzovakashela izihlobo.Kungakhathaliseki ukuthi bangaki abantu abahlala (kuze kufike kubantu abangu-8), ungahlala ngemali engu-36,000 yen ubusuku ngabunye.Sibheke phambili ukubhukha kwakho!
‧ Yilabo kuphela abaqonda imithetho yendlu (ikakhulukazi eminye imithetho) ephawuliwe abazokwamukelwa.Njengoba sisebenza noShimanto, sethemba ukuthi uzoba nesikhathi esimnandi nemvelo, izindawo (omakhelwane), nezingane. Sicela ubuyekeze futhi ucabangele imithetho yendlu.
Umfula i-Shimanto uphambi kwakho. Singakuqondisa futhi ezizweni ezinhle ezihamba phambili ezintabeni.♪ Ukugwedla ngesikebhe, ukuhlenga, ukucaca kanye nokukhempa kuseduze.Indlu yalungiswa ngumdwebi owayengumdwebi we-Miyagi owasebenzisa izihlahla eziningi.Ungabilisa futhi ubhavu ngezinkuni.
Inani lama-futon lifakwe njengo-8, kodwa uma usebenzisa indawo evamile, ungamukela abantu abambalwa. Ingasetshenziswa kalula kuye ngeminyaka yengane.
Ngaphambi nje kwe-Shimanto River. Omakhelwane nabo bakude ngamamitha angaba ngu-100, ngakho izingane zingahlala kahle.Zizwe ukhululekile ukuxhumana nomakhelwane njengoba bebuka ukukhula kwezingane zabo ndawonye, njengoba kungumphakathi omncane onezitolo ezinkulu, izindawo zokudlela, nolwazi lwendawo.
[Othintwayo Wokubhukha Nokuqinisekisa]
Ukuqinisekiswa kokubhukha futhi uphendule njalo ekuseni cishe ngo-9 ekuseni.
Njengebhizinisi eliseceleni, sisebenzisa i-guesthouse yethu endaweni yokuhlala yangasese, ngakho-ke sizama ukuphendula imilayezo nezingcingo engakapheli amahora angu-24, kodwa kungenzeka singakwazi ukuphendula nganoma yisiphi isikhathi.Siyalwazisa usizo lwakho olusheshayo ngalolu daba oluhlaba umxhwele.Uma udinga usizo olusheshayo, sicela usishayele ucingo.
[Phakathi nokuhlala kwakho]
Ngingathanda ukuxhumana nezivakashi ngokuvumelana nezifiso zazo.Ngicela ungazise uma ungathanda ukuba nomndeni wonke, ngingathanda ukukhuluma nawe ngokudla, ukudlala, imishini yezingane, njll., noma nje ukushintshanisa ukhiye.
Ngokuyisisekelo, yindawo eqhelile endlini yethu, ngakho-ke esimweni esiphuthumayo noma uma uyidinga (uma ungahambi ngomsebenzi, njll.), sonke sihlala endlini enkulu eseduze.Ngicela ungazise uma kukhona engingakusiza ngakho.
Izingane zisemncane, ngakho kungenzeka singakwazi ukwamukela izivakashi ebusuku kakhulu noma ngenxa yokutholakala. Siyabonga ngokuqonda kwakho.
Njengebhizinisi eliseceleni, sisebenzisa i-guesthouse…
USasakura Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: M390023804
Hlola ezinye izinketho ezise- Shimanto, Takaoka-gun namaphethelo